Socialbungy: ny sehatra fivarotana mpivarotra miaraka aminao | Martech Zone
Isaky ny misy mpanao dokambarotra vaovao misoratra anarana amin'ny tranokalanay ary manana sehatra marketing izy ireo, matetika isika no milentika lalina kokoa ary manao bilaogy momba azy ireo. SocialBungy vao tsy ela akory izay no nisoratra anarana hanao dokambarotra ka nanamarina azy ireo izahay ary te-hizara izany aminao.
SocialBungy dia marketing amin'ny hetsika sy fitaovam-pandrika fitarihana ho an'ny iPad (na takelaka & PC) ampiasaina amin'ny fanaovana fifaninanana, takelaka, ary fisoratana anarana. Tonga lafatra ho an'ny fampiroboroboana, kioska, trano heva ao amin'ny magazay, na eny an-tsaha mihitsy aza. Omeo olona antony hitsidihana ny trano heva misy ny hetsika na kiosko:
Fitsidihana 44% noho ny fanomezam-pahasoavana na fampiroboroboana.
Fitsidihana 32% hijerena ny mombamomba ny vokatra.
Fitsidihana 13% hijerena votoatin'ny fifandraisana.
Fitsidihana 11% hijerena fampisehoana vokatra.
Tsy ilaina ny fampandrosoana ary azo ampifanarahana amin'ny marikao ny sehatra, ao anatin'izany ny sary. Ireto misy toe-javatra izay ametrahana ny SocialBungy tsara ampiasaina:
Trano fisakafoanana sy kioska - Avadiho ireo mpitsidika tranoheva, vahiny eo am-baravarana, na fifandraisana amin'ny fihaonan'ny marika mandritra ny hetsika ataonao amin'ny fifaninanana, endrika fisoratana anarana, na fampiroboroboana hafa.
Fampirantiana fampirantiana - Omeo fanavaozana ny booth Trade Show avy amin'ny clipboard sy boaty raffle. Ampiasao ny takelakao na solosainao handefasana fampiroboroboana hahazoana fakana mivantana any amin'ny booth-nao.
In-store sy antsinjarany - Mihazakazaha fampiroboroboana amin'ny fivarotana izay ahafahanao misarika fitarihana ary mamadika azy ireo ao amin'ny magazay.
Fampiroboroboana an-dalambe - Mampiasà iPad hanovana ny fifanakalozan-kevitry ny mpiara-mianatra amin'ny ekipa ho lasa fitarika mivarotra azo tsapain-tanana.
Ny endrika mahaliana indrindra an'ny SocialBungy dia ny fahavononan'ny ekipa ampiasaina. Fampiasana sary Analytics manerana ny mpiasao, araho ny ora anaovany ny tsirairay, ary araho ny isan'ny fidirana tsirairay angoniny.
Tags: trano heva hetsikain-pivarotanakiosksfitarihana firakafisoratana anaranaantsinjaranyFanamafisana ny varotraekipa mpivarotrasocialbungyfivarotanafampiroboroboana an-dalambetakelakafampisehoana
5 Mey 2014 tamin'ny 9:01 hariva
Misaotra nizara an'ity info Douglas ity. Raha ny marina dia tsy haiko ny Socialbungy fa hizaha izany tsy ho ela aho.
6 Mey 2014 tamin'ny 3:38 hariva
HI Barbara, izaho no mpanorina eto amin'ny SocialBungy. Raha manana fanontaniana ianao na mila mihazakazaka, aza misalasala mandefa mailaka amiko mbarwick@socialbungy.com